Home Wararka Rajo xumo ka jirta qabsoomida doorasho loo dhan-yahay, lawada ogol-yahay
Rajo xumo ka jirta qabsoomida doorasho loo dhan-yahay, lawada ogol-yahay
Waxaa maalinba maalinta ka danbeeysa rajo beel ka imaanaysaa in ay dalka ka dhacdo doorasho loo dhan-yahay lana wada ogol0yahay. Rajada ugu danbeeysa waxa ay ag-taalaa Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xassan Maxamed (lafta-gareen). Isaga ayaa la rajaynayaa in uu hogaanka u qabto dedaalada u danbeeyey ee la doonaayo in lagu xaliyo caqabadaha hortaagan hirgelinta heshiiskii Muqdisho 17 September 2020 ee qabashada doorashada Baarlamaanka.
Waxaa la soo sheegayaa in Laftagareen u kulamo la qaadan doono wakiilada Beesha Caalamka ee Muqdisho ku sugan, sidoo kale waxa uu kulamo la qaadan doonaa qaybo kamid ah Musharixiinta mucaaradka ah ee Muqdisho ku sugan. Wararku weaxay sheegayaan in 48 saac ee soo socda uu yahay kala bax ku aadan in la qqabto doorasho loo wada dhan yahay iyo in qaybo kamid ah dalka ay doorasho galaan.
Lafta Gareen waa shaqsi u sahqeeya Farmaajo sidaaas darteed waa ay adag yahay in uu noqdo dhaxdhaaxidiye daacad ah. Dhanka kale wararka laga helaayo Dhuusamareeb ayaa sheegaya in halkaas uu ka socdo diyaar garow lagu soo dhaweynaayo ergayga Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan iyo wefdi uu hoggaaminaayo, waa safarkii labaad ee uu ku tago meel ka baxsan Muqdisho tan iyo bilashada sanadkan cusub 2021, Safarkiisa ayaa la xiriira dardargelinta gargarka bini’aadanimo, arrimaha hormarinta iyo sidii heshiis looga gaari lahaa doorashooyinka.
Waxa laqorshaynaa in shir la isugu yimaado waxaa aad u xujeynayey Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland, waxaana wararku sheegayaa in ay u dhawdahay in shir la isugu yimaado, inkasta oo aan la caadeyn halka lagu qabanayo. Lama hubo in shirkaas, waaba hadii uu qabsoomo, in natiijio ka soo baxdo.